Ọnye bụ onye minista njem nlegharị anya Iran ọhụrụ Hon. Seyed Ezatullah Zarghami
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Iran » Ọnye bụ onye minista njem nlegharị anya Iran ọhụrụ Hon. Seyed Ezatullah Zarghami
Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ezzatollah Zarghami, Minister of Tourism Iran Site n'ikike: Khamenei.ir -
Onye isi ala ọhụrụ nke Iran ahọpụtala Hon. Seyed Ezatullah Zarghami dị ka onye minista ọhụrụ nke ọdịbendị omenala na njem. Ọ bụ osote onye minista na ọdịbendị na ministri Alakụba yana ozi nchekwa tupu ọ nọrọ n'ọkwa dịka onye isi mgbasa ozi Alakụba nke Iran site na 2004 ruo 2014.
Ebrahim Raisi, onye isi ala ọhụrụ nke Alakụba Alakụba nke Iran, họpụtara ọkwa ọchịchị ya na Ọgọst 8. Ụlọ omebe iwu ga -akwado ndị otu kabinet niile a họpụtara.
Ministri ihe ọdịbendị na njem nlegharị anya nke Iran ga -enwe Hon. A họpụtara Seyed Ezatullah Zarghami ka ọ bụrụ Minista ọhụrụ.
Na 2018 Iran nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị ọbịa 8 si mba ọzọ.
Iran bụ otu n'ime mmepe obodo kacha ochie n'ụwa, ọ nọkwa n'etiti mmepeanya kacha eche echiche na mgbagwoju anya site na mmalite. Enwere akụkụ nke mmepeanya Iran nke, n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, metụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ ọ bụla nọ na mbara ala. Mana akụkọ banyere ka nke ahụ siri mee, yana ihe mmetụta ndị ahụ pụtara, bụ ihe a na -amaghị na echefuru.
Tourtù njem na njem nlegharị anya nke Iran na -akọwa njem njem na Iran na -asị Njem gaa IRAN. Peasia, Ala nke oge anọ nwere akụkọ ihe mere eme mara mma na nke mara mma, ọtụtụ ihe ncheta, ile ọbịa nke Iran na nri dị ụtọ.
Techiche anyị in Iran dị iche iche, na -enye ọtụtụ ihe omume site na mkpagharị ụkwụ na ịwụ elu na ugwu Alborz na Zagros, ruo ezumike osimiri n'akụkụ Ọwara Peshia.
COVID-19 etiela Iran ihe dị ka ya na ụlọ ọrụ njem na njem ya.
Industrylọ ọrụ njem nlegharị anya nke Iran ataala ihe dị ka puku ijeri dọla 320 (ijeri $ 7.6 na ọnụego mgbanwe gọọmentị nke rial 42,000 kwa dollar) kemgbe ntiwapụ nke ọrịa coronavirus, ISNA kọrọ na Tuesday.
Akụkọ ahụ gbakwụnyere na ọrịa ọjọọ ahụ emebiwokwa ihe karịrị ọrụ 44,000 na mpaghara njem otu oge na -emepe emepe nke mba ahụ.
N'ihi ntiwapụ nke coronavirus na Iran na enweghị ọrụ na mfu ego, ụlọ ebe obibi kacha ata ahụhụ. Ọnụ ọgụgụ ndị a na -ekpuchi oge n'etiti February 2020 na oge opupu ihe ubi nke 2021.
Ebe obibi ahụ ewerela ihe dị ka puku ijeri dọla 280 (ijeri $ 6.6) site na nje ahụ, ebe ihe karịrị ndị ọrụ 21,000 nọ na ngalaba ndị a efunahụla ọrụ ha n'oge a kpọtụrụ aha.
Ndị ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya abụrụla ndị nke abụọ metụtara na ụlọ ọrụ njem, yana ihe karịrị puku ijeri iri ($ 10 nde) mebiri yana ihe karịrị mmadụ 238 enweghị ọrụ kemgbe ntiwapụ ahụ.
N'ihe banyere ọrụ na mfu ego, ogige ndị njem, ebe obibi, na ndị na-ahụ maka njem sokwa na ndị otu ihe metụtara na ụlọ ọrụ njem.
Ònye bụ ọ Hon. Sayyid Ezzatollah Zargham, onye minista njem nlegharị anya nke Alakụba Alakụba nke Iran?